टेलिभिजन र चलचित्रको आध्यात्मिक प्रभाव
१. टेलिभिजनबाट हुने प्रभावहरूको परिचय
धेरै जसो मानिसहरु आफ्नो दिन प्रति दिनको समस्याबाट बच्नको लागि, मनोरन्जन, जानकारी र अनुभवको विश्वसँग जोडिनको लागि टेलिभिजन एउटा माध्यम हो ।
टेलिभिजन र चलचित्रको सार्वजनिक अपीलले, हामीले दर्शक र उहाँहरुको वातावरण माथि यसको आध्यात्मिक प्रभावको अभ्यास गरेका थियौं । यी प्रश्नहरुको उत्तर दिएको छ :
टेलिभिजन र चलचित्रबाट दर्शकलाई र नजीकको वातावरणमा कस्तो प्रभाव पर्दछ ?
के कार्यक्रमको प्रकारले हामीले अनुभव गर्ने प्रभावलाई असर गर्दछ ?
२. टेलिभिजनको प्रभावहरू
यद्यपि हामी समाचार, जानकारी र मनोरन्जनको लागि टेलिभिजन माथि अधिक निर्भर गर्दछौं; तर अनुसन्धानबाट यसको नकारात्मक प्रभाव पनि अगाडी आएको छ । निम्न सूचीमा हामीले आजको समाजद्वारा टेलिभिजनको आलोचना सूजीबद्ध गरेका छौं । (सन्दर्भ: CyberCollege)
टेलिभिजनले मोटापा बडाउनमा योगदान पुर्‍याउँदछ
टेलिभिजनले व्यक्तिगत जिम्मेवारीबाट भाग्न प्रोत्साहित गर्दछ
टेलिभिजनले वास्तविताको असत्य छविलाई प्रस्तुत गरेर वास्तविकतालाई बिगारी दिन्छ ।
टेलिभिजनले आर्थिक शोषणको लागि तपाईलाई आकर्षित गर्दछ । यसले विज्ञापनद्वारा उपभोगता संस्कृतिलाई जन्म दिन्छ ।
सांकेतिक कामुकता दर्शाएर टेलिभिजनले नैतिक मूल्य कम्जोर पार्दछ ।
टेलिभिजनमा देखाएको हिन्सक दृश्यहरूले दैनिक व्यवहारमा हिन्सा जगाउँछ । (सन्दर्भ : New Scientist)
अधिकांश मानिसहरुले अनुभव गरेका छन् कि उनीहरू टेलिभिजन छोड्न सक्दैनन्, अथवा अधिक समय टेलिभिजनको कार्यक्रमको विषयमा सोच्ने, चर्चा गर्ने अथवा पुन: प्रसारण हेर्न व्यतीत गर्दछन् । यसको दुष्पप्रभाव विपरीत, यसमा के छ, जसले व्यक्तिलाई आकर्षित गर्दछ ? यसको उत्तर दिनको लागि एसएसआरएफद्वारा अध्यात्मिक अनुसन्धान गरिएको थियो जसले यो दर्शाउछ कि टेलिभिजन हेर्दा खेरी आध्यात्मिक आयाममा के घट्दछ ।
३. टेलिभिजनको आध्यात्मिक प्रभावहरू
कु. प्रियंका लोटलीकर, उहाँ विकसित छैठौं इन्द्रिय भएकी साधिका हुन् । उहाँले अभ्यास गर्नु भयो कि जब कसैले टेलिभिजनमा मनोरन्जक कार्यक्रम हेर्दछ आध्यात्मिक आयाममा के घट्दछ । उनीले यसलाई एउटा सूक्ष्म-ज्ञान माथि आधारित चित्रको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेको छ ।
यी निष्कर्षहरू सत्यताको लागि परम पूज्य डा. आठवलेद्वारा जाच गरिएको छ ।
खोजको सारांश निम्नलिखित छन् :
जब मनोरन्जक कार्यक्रम प्रसारित हुन्छ तब कष्टदायी शक्तिको चक्र टेलिभिजन यन्त्रको चारैतर्फ निर्माण हुन्छ र कष्टदायी शक्ति वातावरणमा ध्वनि चक्रको रूपमा प्रक्षेपित हुन्छ ।
दर्शकको मनको चारैतर्फ कष्टदायी शक्तिको जाल निर्माण हुन्छ र चारैतर्फ कष्टदायी शक्तिको आवरण निर्माण हुन्छ । यहाँ सम्मकि टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्ने व्यक्तिको विचारद्वारा वातावरणमा कष्टदायी शक्तिको स्पन्दन प्रक्षेपित हुन्छ ।
भ्रम पैदा गर्ने शक्ति (मायावी शक्ति) को चक्र टेलिभिजन वरिपरि उत्पन्न हुन्छ । यसले दर्शकमा मायावी शक्तिको चक्रको निर्माण गर्दछ ।
भ्रमात्मक (मायावी) स्पन्दनहरू टेलिभिजन कार्यक्रमहरू मार्फत उत्सर्जित हुन्छन् । धेरै जसो टेलिभिजन कार्यक्रमहरूले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्; परिणाम स्वरूप मायावी स्पन्दन परिसरमा र वातावरणमा अधिक मात्रामा प्रक्षेपित हुन्छ । यसबाहेक, दर्शक अधिक काल्पनिक सन्सारमा डुब्न थाल्दछ, जसको कुनै पनि अस्तित्व हुँदैन ।
व्यक्ति यी टेलिभिजनको कार्यक्रमहरू हेरेपछि बहिर्मुख हुन्छ र यसले उनको मन र बुद्धिमा असर गर्दछ र त्यहि अनुसार उनी व्यवहार गर्न थाल्छ ।
अध्यात्मिक अनुसन्धानले देखाउदछ कि टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरु किन मन्त्रमुग्ध हुन्छन् । आधुनिक विज्ञानद्वारा टेलिभिजनको दुष्परिणामलाई पनि यो अनुसन्धानले आधार प्रदान गर्दछ ।
४. टेलिभिजनको सामग्री र कार्यक्रमको प्रभाव
अनुसन्धानको परिणामले हामीलाई यो सोच्नमा बाध्य बनायो कि केवल मनोरन्जक कार्यक्रमसम्म सीमित छ अथवा कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रममा यो कुरा लागु हुन्छ । हामीले पायौं कि सत्वप्रधान विषय वस्तु हेर्दा हाम्रो लागि लाभदायक हुन्छ जबकि तमप्रधान विषय वस्तु हाम्रो लागि हानिकारक हुन्छ । टेलिभिजन कार्यक्रम कस्तो प्रकारको हो यसमा कष्टदायी शक्तिको प्रक्षेपित स्पन्दन निर्भर गर्दछ ।
४.१ टेलिभिजन कार्यक्रमको आध्यात्मिक शुद्धतालाई असर गर्ने कारकहरू
हाम्रो, विकसित छैठौं इन्द्रियको साधकहरुले विभिन्न प्रकारको टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रभावलाई आध्यात्मिक स्तरमाथि विश्‍लेषण गरेका छन् ।
विभिन्न प्रकार को टेलिभिजन कार्यक्रमहरुको आध्यात्मिक प्रभाव
सत्वप्रधान कार्यक्रमहरु सत्संग र उच्चस्तरको सन्तबाट हुने अन्य कार्यक्रमहरु
रज-सत्व प्रधान कार्यक्रमहरु यात्रा
रज-तम प्रधान कार्यक्रमहरु खेलकूद कार्यक्रमहरु
तमप्रधान कार्यक्रमहरु वास्तविकतामा आधारित कार्यक्रमहरु
अत्याधिक तमप्रधान कार्यक्रमहरु अश्लील चलचित्रहरु
हामीले यो पनि पायौं कि जब कार्यक्रममा हिन्सा, हत्या, नग्नता अथवा कामुकता सम्मिलित हुन्छ तब कार्यक्रम र दर्शक दुवैमा तामसिक घटक बढ्दछ । अशिष्ट भाषामा गाली-गलौज, धर्मको निन्दा र तमप्रधान भाषाले पनि दर्शक माथि नकारात्मक प्रभाव हुन्छ ।
सुझाव : तपाइँ पनि सूक्ष्म परीक्षण गर्न सक्नु हुन्छ र विभिन्न प्रकारको टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्दै तपाई आफैलाई कस्तो अनुभव हुन्छ यसको अभ्यास गर्न सक्नु हुन्छ । हामी चाहन्छौं कि तपाई आफ्नो अनुभव PostaComment मा लेखेर हामीलाई पठाउनुहोस् ।
४.२ सात्विक कार्यक्रमहरू
कु. प्रियंका लोटलीकरले अभ्यास गरिन् कि कसैले सत्वप्रधान कार्यक्रम हेर्दा अध्यात्मिक स्तरमा कस्तो प्रभाव पर्दछ । यसको लागि प.पू. भक्तराज महाराज, उच्चतम स्तरको एउटा सन्तको सत्संगको प्रवचन भिडियो थियो ।
परिणामको सारांश निम्नलिखित छन् :
सन्तको सत्संगको ध्वनि चक्र (CD) हेर्दा दर्शकमा भावको वलय कार्यरत हुने ।
सन्त बोल्ने समयमा आनन्द, चैतन्य र शक्तिको निर्माण भएर दर्शकतर्फ प्रक्षेपित हुने ।
वातावरणबाट कष्टदायक शक्तिहरु हट्न थाल्छन् ।
सन्तको शब्दमा पूर्ण सत्य हुन्छ र परिणाम स्वरूप, दर्शक अध्यात्ममा अधिक भन्दा अधिक डुब्न थाल्छ र भित्रबाट आनन्द र दिव्य चेतनाको अनुभव गर्न सक्षम हुन्छ ।
टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्ने दर्शक सन्तको प्रबचनको कारण अन्तर्मुख हुन्छ र उनको मन र बुद्धि त्यस अनुसार व्यवहार गर्न थाल्छ ।
यस विश्लेषणबाट हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौं कि सत्व प्रधान कार्यक्रम जस्तै सन्तको सत्संग इत्यादि हेर्दा आध्यात्मिक रुपमा लाभदायक हुन्छ । दुर्भाग्यवश टेलिभिजनमा यस्ता कार्यक्रमहरूको आवृत्ति नगण्य छ ।
५. चलचित्रहरूको आध्यात्मिक प्रभावहरू
माथि उल्लेख गरिएको सिदान्तहरु फिल्म हेर्नको लागि पनि सही छ, थप केहि उल्लेखनीयहरु सहित :
जुन प्रकार आध्यात्मिक व्यक्तिको सत्संगमा रहदा हाम्रो सकारात्मकता बढ्दछ त्यस प्रकारले अत्याधिक राजसिक अथवा तामसिक वातावरण जस्तै सिनेमागृहले हाम्रो नकारात्मकतालाई बढाउद्छ ।
अँध्यारो कोठामा चलचित्र हेर्दा यसको प्रभाव अझै बढदछ । चर्को आवाज र तीव्र प्रकाशले प्रभावलाई अझ बढाउँदछ ।
कार्यक्रमको प्रकार टेलिभिजनको अनुसारनै रहन्छ; तर चलचित्र रङ्गशाला अनुभव हुनको कारण, जस्तो की पहिला भनिएको थियो, यसमा रज-तम घटक धेरै हुन्छ ।
हामी टेलिभिजन अथवा चलचित्र आफ्नो प्रतिदिनको दैनिक कार्यहरुबाट बचनको लागि र मनोरन्जनको रूपमा प्रयोग गर्दछौं । तर केवल साधनालेनै हामीलाई पूर्ण शान्ति, विश्राम र आनन्द दिन्छ जसलाई हामी अन्य माध्यद्वारा खोज्दछौं । सन्तको सत्संग हेर्नु, सत्संगमा जानु, नामजप, प्रार्थना, सत्सेवा र साधनाको अन्य पक्षहरुले हाम्रो आध्यात्मिक स्तर बढदै जान्छ ।
कहिलेकाही टेलिभिजन र चलचित्र हेर्नु, परिवार र मित्रको साथ भेट्घाटको एउटा तरीका हो र छनौट गर्नको लागि सम्भव हुँदैन । जब छनौट गर्नको लागि हामीसँग छैन भने त्यो कार्क्रम हेर्न हुन्छ कि हुँदैन । यस्तो परिस्थितिमा कार्यक्रम भन्दा पूर्व, अन्तरगत (कार्यक्रम भइरहेको समय) र कार्यक्रम समाप्त भएपछि नामजप र प्रार्थना जस्तो सजिलो कृतिले हाम्रो रक्षा गर्नमा अत्याधिक सहायता गर्दछ । उदाहरणको लागि यो प्रार्थना “हे ईश्‍वर, कृपया चलचित्र / टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्दाको दुष्प्रभावबाट मेरो रक्षा गर्नुहोस् र पूरा समय मेरो नामजप गराउनुहोस् । तपाईको नामजपको शक्तिको सुरक्षा कवच मेरो चारैतर्फ निर्माण हुन दिनुहोस्” ।
बिस्तारै-बिस्तारै हामी टेलिभिजन र चलचित्रमा बर्बाद हुने समय कम गर्न सक्छौं । हामी तमप्रधान कार्यक्रम हेर्नबाट पनि बच्न सक्छौं ।
जसरी हाम्रो साधना बढदै जान्छ, हामी भित्र सत्वगुण बढदै जान्छ । यस्तो गर्नाले हाम्रो मनोरन्जन विधिको चुनाव पनि स्वाभाविक रूपमा धेरै सात्विक हुन थाल्छ किनभने आध्यात्मिक रूपले लाभदायक कृतिहरुलाई स्वीकारन हाम्रो योग्यता बढ्दछ र हामीलाई यसले आध्यात्मिक रूपमा शक्तिशाली बनाउदछ ।